Download Sniper 3D Gun shooter: Free Shooting Games- FPS
ချိန်ပီးပစ်ပါ။fps shooting ဂိမ်းများထဲမှအကောင်းဆုံးကို ယခုပဲဒေါင်းလုတ်လုပ်လိုက်ပါ။အနာဂတ်ဇာတ်ညွှန်းမှာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လိုက်ပါ။
Sniper3D Assassin,စကားလုံး၇လုံးး ကောင်းမွန်လွန်းသောကစားဟန်၊ြေ ကာက်စရာကောင်းသောပုံများဖျော်ဖြေရေးမစ်ရှင်များ၊အားလုံးအကောင်းဆုံး။ဒီဂိမ်းသည်အခမဲ့ဖြစ်ပီးအချိန်တွေကိုဖြတ်ကျော်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ပြန်ပေးသမားများရဲ့ ဗုံးတိုက်ခိုက်မှုများကို ခံစစ်ပီး ဓားစာခံရန်သည် အရေးကြီးပါသည်။
ထူးခြားချက်များ
အလွန်ကောင်းသော3D ဂရပ်ဖစ်များ၊သားနားလွန်းသောရုပ်ပုံများ
မျိူးစုံသောစစ်မြေပြင်များ- ကြီးမားသောမြို့ များမှ လှပသောကမ်းခြေများ တွင် ကစားပါ။
လီတယ်သေနတ်များနဲ့ သေစေသောလက်နက် တန်ပေါင်းများစွာ
စွဲမက်ဖွယ် FPS gameplay
သင့်ဖုန်းရော တက်ဘလက်နဲ့ ပါ အခမဲ့ကစားပါ။
သေနတ်ပစ်ဂိမ်းအကြောင်းသိရလို့ စွံ့ အမသွားပါနဲ့ ။ဒီနေရာမှာ သင့်တာဝန်က အချိန်နဲ့တပြေးညီပြိုင်ဆိုင်ရခြင်း၊ဟယ်လီကော်ပတာများဖောက်ခွဲခြင်း၊ဇွန်ဘီးများကိုသတ်ခြင်း၊ဖြည်းဖြည်းချင်း ပစ်ချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။လွတ်မြောက်ချင်းက အရေးပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့ သင် ပဟေဋ္ဌိကိုဖြေရှင်းန်ုင်လား၊ပြည်သူတွေကိုကယ်တင်နိုင်လား၊လူအုပ်ထဲမှာပုန်းနေသော တားဂတ်အမှန်ကိုသာ သတ်နိုင်လား။သင် ပြန့်နှံ့ နေသော အမည်မသိဗိုင်းရပ်စ်များကို ရပ်တန့်နိုင်မလား။လူတွေကို ကယ်တင်ရန် တာဝန်ခေါ်စာ ကို သင်လက်ခံပီးပါပီ။
အတော်ဆုံး သေနတ်ပစ်သမား ဖြစ်ချင်တာလား။ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းမှာ အကောင်းဆုံး စနိုက်ပါသမားတစ်ယောက် ဖြစ်လိုက်ပါ။တိုက်ပွဲက အစစ်ဖြစ်ပီး သူရဲကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်လိုက်ပါ။
၊Alpha,Bravo,Charlie,သင်မှတ်နိုင်လား။ပစ်မှတ်ကိုရှာပီး ချိန်ပစ်ပါ။
သူလျှိူ များရန်မှ ပြည်နယ်လျှိ့ ဝှက်ချက်များကိုထိန်းသိမ်းပီး ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဗိုင်းရပ်စ်များကို တားဆီးပေးပါ။သင့်မှာ အရည်အ ချင်းရှိပါသလား။အဏုမြူရန်မှ သင့်နိုင်ငံကို ကူညီပေးမှာလား။
ရန်သူဆီမှာ ဓားစာခံများရှိနေပါသည်။သင် ဖွင့်တိုက်မလား ခိူးဝှက်တိုက်မလား
ရန်သူတပ်က သူတို့ရဲ့ ပစ်မှတ်ဆီကို ချီတက်နေပါသည်။သူတို့ကို အ ချိန်နဲ့ မရောက်ပါစေနဲ့။
ဇွန်ဘီးတစ်ကောငိမှ အသက်ရှင်မကျန်ရစ်ပါစေနဲ့။ဒီ FPS SHOOTING GAME က စွန့်စားမှုများအားလူံးအတွက် သင်ပြင်ဆင်ပီးပီလား။ပြိူင်ဆိုင်မှုတွေမှာ လွတ်မြောက်ချင်ပါသလား။
ထူးခြားသောလက်နက်များကို လော့ဖွငိ့ပီး အမြောက်တပ်တွင် မြှင့်တင်လိုက်ပါ ။
ဂိမ်းမှာ အကောင်းဆုံးစနိုက်ပါရိုင်ဖယ်များ။သေနတ်များ၊ပစ်စတိုများ ကို သင့်မှာရှိတဲ့ GEMS ဖြင့် ၀ယ်ယူပါ။ကျည်။သေနတ်ပြောင်းကို ပိုမိုပျက်စီးအောင်ပစ်နိုင်သော ကျည်ဆံများဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော range,scope,stability,zoom ရှိပါစေ။အမဲလိုက်ရိုင်ဖယ်၊ထူးခြားသော mp5, မြင်းပေါက်တစ်ကောင် တို့ကို လက်နက်တိုက်တွင် သင်ရွေး ချယ်လိုပါသလား။
Sniper3D သည် ပျော်ရွှင်မှုရရန် အွန်လိုင်းအမြဲတမ်းဖွင့်စရာ မလိုပါ။သင် လေယာဉ်ပေါ် ကားလမ်းမပေါ် သွားနေစဉ်တွင်လဲ ပျော်ရွှင်စွာ ကစားနိုင်ပါသည်။အချိန်အလိုက်သာ အွန်လိူင်းဒေါင်းလုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
PVP mode ကြိုးစားကြည့်ပါ။သင်၏သေနတ်ြ ပင်ဆင်ပီး ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ပါ။သင်၏ သတ်နိုင်နှုန်းကို စမ်းသပ်ပေးပါလိမ့်မည်။အချိန်ကြာရင် သင်သေပါလိမ့်မည်။သင် လေ့ကျင့်ပြုမူနည်းများ ကို လိုက်နာရပါမည်။ကမာအနှံ့မှ အခြားကစားသမားများနဲ့ သင် ယခုပဲ ချိတ်ဆက်ကစားနိုင်ပါပီ။
ကျွှန်ုပ်တို့ ဂိမ်းသည် သင့်မိုဘိုင်းပလန်မှ ဒေတာများစွာကို မကုန်စေပါ။သီချင်းနားထောင်ရန် အွန်လိုင်းဗီဒီယိုကြည့်ရန် သင်သုံးလိုတဲ့ဒေတာကိုမကုန်စေပါ။ကန့်သတ်ထားသောဒေတာအသုံးပြုမှု နဲ့ ပျော်၇ွှင်ပါစေ။
ှSniper3D Assassin သည် အခမဲ့ ဖြစ်ပေမဲ့ တကယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်ယူရွေးချယ်ရသော အရာများ ပါဝင်ပါသည်။သင့်ခလေးငယ်များနှင့် ငယ်ရွယ်သူများအတွက် အဲ့ဒါတွေကို သင်ဖယ်ထားနိူင်ပါတယ်။
Sniper 3D Assassin သည် သင့်အတွက် အခမဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအဖြစ် ယူဆောင်လာပါပီ။
Sniper 3D is an addictive game that features very realistic graphics, in which you have to complete missions with only the help of your aim and other skills. It also has intuitive controls that are truly immersive, which make hitting your objectives quite difficult. It’safree fps game to pass the time! Defend the victims from kidnappings to bomb attacks: hostage survival is critical!
Finding Myanmar 13 pocker, game android, tower defense
ရှာတှေ့ android game, myanmar 13 poker, Shan koe mee